Ijikọ Digital Marketing na Nkwado Gị | Martech Zone
Nkwado ahịa na-eweta uru dị oke mkpa karịa nzipụta akara na ntanetị weebụsaịtị. Ndị ọkaibe nwere ọkaibe taa na-achọ inweta ọfụma na nkwado, otu ụzọ a ga-esi mee nke a bụ iji uru nke njikarịcha njin ọchụchọ. Iji meziwanye nkwado ahịa na SEO, ịkwesịrị ịchọpụta ụdị nkwado dị iche iche dị na njirisi isi dị mkpa iji nyochaa ọnụahịa SEO.
Omenala mgbasa ozi - Bipute, TV, Redio
Nkwado site na mgbasa ozi ọdịnala na-abịakarị n'ụdị mgbasa ozi ma ọ bụ nkwado nke ndụ na mmemme (dịka, "Ozi a wetara gị site na…"). Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji dọọ ndị ọrụ gaa na weebụsaịtị gị, ọ nwere obere SEO uru n'onwe ya.
Ma ọ ga-ekwe omume iwepụta ike nke saịtị saịtị iji kwado atụmatụ gị SEO. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-enye atụmanya maka ịga na weebụsaịtị gị site na nkwado, nye ha nhọrọ ịkekọrịta ibe ha rutere site na ụzọ dịka bọtịnụ nkekọrịta mmekọrịta na email. Ekekọrịta mmekọrịta nwere ike izipu "akara" azụ na injinị ọchụchọ ma gosipụta ohere maka ndị mmadụ iji jikọta weebụsaịtị gị na saịtị ndị ọzọ dịka blọọgụ na ọgbakọ.
Mgbasa ozi nwere ike inye nnukwu SEO uru mgbe a haziri ya ma tinye ya n'ọrụ nke ọma. Enwere echiche ndị dị mkpa mgbe ị na-ekwu uru nke mgbasa ozi.
PageRank - Agbanyeghị na Google nwere ike ọ gaghị etinye ọtụtụ ngwaahịa ha jiri na PageRank, uru ahụ apụbeghị kpamkpam. Ọ ka bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji chọpụta ike nke njikọ na-apụ apụ na weebụsaịtị.
Achọpụta - Weebụsaịtị nke jikọtara gị na ya kachasị mma mgbe ha nwere ikikere ma dịkwa mkpa. Mgbe enwere ike, jiri ike SEO nke ijikọ ndị mmekọ yana ọdịnaya metụtara ụlọ ọrụ na ngwaahịa / ọrụ gị.
Mpụga njikọ - Nke a na-abụkarị eleghara metric, mana nke na-eto eto dị mkpa ka Google na-emelite algorithms ha. Olu dị elu nke njikọ na-apụ apụ site na weebụsaịtị nwere ike ịpụta "spammy" na engines ọchụchọ. Ọ bụrụ na enyere gị mgbasa ozi na ibe ọdịnaya gị ga-ejupụta na Google Adsense ma ọ bụ jikọta nke ọzọ ndị nkwado, o nwere ike ịbụ ihe dị mma ịgafe.
Nkwado Social Media
Nkwado mgbasa ozi ọha na eze nwere ike iburu uru SEO, yana mmetụta ha na SEO nwere ike ịbawanye ka netwọkụ mmekọrịta na-agbasawanye. Ọ bụrụ na a na-enye gị akwụkwọ nkwado Tweet ma ọ bụ Facebook dị ka akụkụ nke mmekọrịta, ị kwesịrị ịlele uru ọ bara na usoro ọgụgụ isi.
Companylọ ọrụ a ọ nwere nnukwu ndị na-eso Twitter ma ọ bụ Facebook fans? Ikekwe nke kachasị mkpa, ha nwere ọnụego dị elu n'etiti ndị otu obodo ha? Ọ bụrụ na ị kpebie ịchụso nkwado nke gụnyere usoro mgbasa ozi ọha na eze kwuru, gbaa mbọ dee Tweet ma ọ bụ Facebook tinye na SEO n'uche.
Gụnye aha ngwaahịa ma ọ bụ aha ọrụ ị na-elekwasị anya, yana njikọta azụ na webụsaịtị gị. Ewu ewu bụ otu n’ime akara ngosi kachasị mkpa zigara na injin nchọ na netwọkụ mmekọrịta. Gbaa mbọ hụ na ndị otu mgbasa ozi gị na-agagharị ma ọ bụ na -ekekọrịta posts iji mee ka ọrụ kachasị elu.
Buru n'uche na engines ọchụchọ ga-agụ akara mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma kọwaa ya na mkpokọta weebụsaịtị gị dum, mana uru ga-adalata ma ọ bụrụ na ịnweghị ịga n'ihu izipu akara ndị a. Gbalịa ịchebe nkwado nke na-akwalite akara gị site na mgbasa ozi mmekọrịta na otu usoro.
Nkwado vidiyo na-abịakarị n'ụdị tupu mpịakọta ma ọ bụ ntinye adjeti n'akụkụ saịtị ntanetị dabere na vidiyo. Ntinye mgbasa ozi dịka ndị a nwere ike izipu okporo ụzọ na weebụsaịtị gị, mana ha nwere obere SEO uru karịrị nke ahụ- belụsọ na ohere nkwado vidiyo dị na saịtị ama ama dị elu, Youtube.
Iji malite, lelee onye gị na ya nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na ha ga-enye gị njikọ na-adịgide adịgide n'ime nkọwa vidiyo ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, njikọ a kwesịrị nkọwa nke ibe ọ na-ejikọ (gụnyere 1 ma ọ bụ 2 isiokwu dị iche iche) yana njikọ nwere ederede arịlịka bara ọgaranya.
Ọ dị mkpa ịkọwapụta na njikọ sitere na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta dịka Youtube ka a na-ahụta dị ka "ndị na-esoghị," agbanyeghị, ọtụtụ n'ime anyị na ngalaba SEO kwenyere na njikọ ndị na-esoghị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-abawanye uru, yana dịka usoro mgbasa ozi ndị ahụ ekwuru. ihe nkwado, ga-aga n'ihu na-eto n'ọdịnihu.
Ndepụta / Ndepụta nkwado
Ọtụtụ nchịkọta nkwado ga-agụnye ndepụta n'ime "Ndị Nkwado" ngalaba na weebụsaịtị onye otu. Ndepụta ndepụta ndị a nwere ike ịme ihe dịka akwụkwọ ndekọ aha, nke taa ka na-eweta oke SEO ohere. Enwere echiche dị oke mkpa maka ibe ndị dị ka ndị a;
PageRank - Dịka e kwuru na ngalaba mgbasa ozi, lelee PageRank nke weebụsaịtị ahụ ga - egosi gị na ngalaba nkwado raara onwe ya nye - nke dị elu, nke ka mma.
Nkọwa na Njikọ - Gbalịa hụ na ọ bụghị naanị ka egosiri gị na peeji nke ndị nkwado, mana na ị nwere ntakịrị nkọwa ma nwee njikọ ederede na weebụsaịtị gị. Akara osisi bụkarị ụzọ dị mfe iji melite peeji ndị a. Otu njikọ sitere na njirimara ga-aba ụfọdụ uru, mana ịchọrọ n'ezie ịchọọ njikọ ederede ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, dee nkọwa omenala nke azụmahịa gị, ngwaahịa, wdg (na isiokwu elebara anya).
Na mmechi, nkwado nwere ike iburu uru SEO bara uru mgbe enyocha ma mejuputa ya nke ọma. Ohere nkwado ọ bụla pụrụ iche, na nkwanye mmejuputa ọ bụla kwesịrị ịbụ omenaala.
Tags: mgbasa ozibacklinksndebanye ahanjikọoutbound njikọpeeji nkeebipụtaRadiomkpankwado mgbasa ozinkwadoọdịnala ọdịnalatvnkwado vidiyo
Ọkt 11, 2012 na 2:07 PM
Anyị enweela nsonaazụ dị egwu site na ndị na - akwado anyị na Blog Technology Technology ma gaa n’ihu na-enye ndị nkwado anyị nnukwu uche. Na ekele, anyị na-akwalite ụlọ ọrụ na ọrụ ha mgbe niile - ma na-egosipụta mmekọrịta anyị. Echere m na nkwado bụ atụmatụ dị egwu nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ kwesịrị iji. Nkwado nkwado anyị nwetara na Blog Technology Technology na-aga n'ihu na-enye anyị ohere itinye ego na ịkwalite saịtị ahụ na ịnweta okporo ụzọ ndị ọzọ - nke ahụ, na-eme ka ndị na-akwado anyị lebara anya. Akwa post, Thomas!
Ọkt 11, 2012 na 8:16 PM
Redio na igwe onyonyo ka na-arụ ọrụ taa? Nkwado, nkwado dị oke mma mana ọ dị mkpa ka enyocha ya yana ọkachasị mgbe ị na-etinye ego na akpa gị dịka ego gị. Ọ na - ewe oge iji kpebie isi ihe ụfọdụ ị ga - akwado iji nweta uru na ya.